Onye Etiopia na-eduga n'Africa na ndị njem na ndị njem na-ebu ibu n'oge nsogbu COVID-19
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Etiopia Na -agbasa Akụkọ » Onye Etiopia na-eduga n'Africa na ndị njem na ndị njem na-ebu ibu n'oge nsogbu COVID-19
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Etiopia Na -agbasa Akụkọ • News • Ịrụ ọrụ • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Transportation • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ dị iche iche
Tewolde Gebremariam, onye isi ndị isi nke ụgbọ elu Ethiopia
Dika akuko nke African Airlines Association (AFRAA) si kwuo, Etiopia bu ndi mbu nke ndi njem na nke ebu ibu na 2020.
Onye Etiopia buuru puku tọn 500 nke ibu na nde mmadụ 5.5 gafere isi ọdụ ụgbọ elu ya, Addis Ababa Bole International Airport.
Ọnụ ibu ejirila ihe karịrị 500 puku tọn ibu n'oge afọ 2020.
Etiopia tinyekwara ndepụta ahụ na mba ndị jikọtara ọnụ na Africa.
Airlinestù Ethiopian Airlines, ụgbọ elu kasị ukwuu na Pan-Africa, abụrụla nke kacha elu n'Africa
ụgbọ elu na ndị njem na ndị na-ebu ibu na-ejide ọnọdụ ndu ya na kọntinent ahụ.
Dika akuko nke African Airlines Association (AFRAA) si kwuo, Etiopia bu ndi nke mbu site na ndi njem na ebu ahia na 2020. Etiopia buuru 500 tọn ibu na ndi njem 5.5 site na isi ulo oru ya, Addis Ababa Bole
Ọdụ ụgbọ elu mba ụwa.
Airlinestù Ethiopian Airlines Onye isi oche Tewolde Gebremariam kwuru, “Anyị na-asọpụrụ
gaa n'ihu na ndu anyị ọbụlagodi Nsogbu Ọrịa Global Pandemic nke mebisiri ụlọ ọrụ ụgbọelu. Nke a bụ ngosipụta nke anyị resili na agility. Obi dị anyị ụtọ na ọrụ anyị rụrụ n'ọgụ a na-alụso ọrịa a ọgụ site na ịga n'ihu na njikọ ikuku anyị nke dị ezigbo mkpa n'ime Africa na mba ndị ọzọ na-enweghị nkwụsị ụgbọ elu ọ bụla. Anyị na-azọpụta ndụ site na njem nke ụgbọ mmiri nke ọgwụ na ọgwụ mgbochi.
Airlinesgbọ elu Ethiopian ọdụ ụgbọ elu kachasị na ndepụta ndị njem kachasị elu nke ọdụ ụgbọ elu Addis Ababa Bole International. A na-ebufe ndị njem njem 5.5 site na ọdụ ụgbọ elu. N'ime njem a, Etiopia buuru ndị njem nde 5.2 na ndị ụgbọ elu ndị ọzọ bufere ndị njem fọdụrụnụ. Ọnụ ibu ejirila ihe karịrị 500 puku tọn ibu n'oge afọ 2020.
Etiopia tinyekwara ndepụta ahụ na mba ndị kachasị na Africa jikọọ ọnụ n'ihi ọdụ ụgbọ elu ndị Etiopia ụgbọ elu buru ibu n'ime kọntinent ahụ.